Paramende Inoudzwa Kuti Hwange Colliery Ine Huori Hunosemesa
Nhengo dzebhodhi rekambani yeHwange Colliery dzaudza paramende kuti mukambani iyi mune huwori hunotyisa zvekuti pane vamwe vanhu vane simba zvekuti vanopindira mumabasa ekambani iyi vachiti vatumwa nemutungamiriri wenyika kana negurukota rezvemighodhi.
Vakasanobata chinzvimbo chasachigaro webhodhi reHwange, Amai Julian Muskwe, nhengo yebhodhi iri, VaEward Tome, nevamwe vavo vaudza komiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemigodhi kuti vanhu vakaita senhengo yeZanu PF, VaShepard Tundiya, vari kupindira mumashandiro ekambani iyi zvekuti pane imwe nguva, vakatombodzora kubasa vamwe vashandi vainge vadzingwa basa nebhodhi.
Vati chinoshamisa ndechekuti VaTundiya vanopindira mumashandiro ekambani iyi uye vanoudza bhodhi kuti vanozivana nemutungamiriri wenyika, pamwe negurukota rezvemighodhi, VaWinston Chitando.
Amai Muskwe vati semuenzaniso mushure mekunge vamisa mukuru anoona nezvemari mukambani iyi nekuda kwehowori, VaTawanda Marapira, VaTundiya vakavaudza kuti vavadzorere pabasa nekuti ndizvo zvaidiwa naVaChitando
Vati pavakaramba kuita izvi vakabva vafanonerwa naVaTundiya vachinzi vauye kuState House kuHarare.
Vati pavakasvika kuState House havana kuona mutungamiriri wenyika asi vakaona mumwe mukuru weko anonzi VaTapfumaneyi akavaudza kuti bhodhi ravo rishande naVaTundira zvakanaka.
Amai Muskwe vati vakashamisikawo kuti pavakozokokwakumahosifi egurukota rezvemigodhi, VaTundiya vaiveko, kuhofisi ikoko.
Vati zvechokwadi VaChitando havana kutaura. Vati kubvira musi uyu, VaTundira vakatanga kuita madiro aJojina mukambani yeHwange.
Zvichakadai, VaTome vaudzwo komiti iyi kuti zviri kubuda muongorora yeForensic Audit zvinoratidza kuti mukambani iyi mune huwori hunotyisa.
Vati mamiriyoni nemamiriyoni emadhora akabiwa uye vachatozoziva huwandu hwayo kana ongororo iyi yapera.
Vati vakuru vakuru vekambani iyi vaitengesa marasha vasingabhadhare makambani avaipa basa nevashandi izvo zvakazoita kuti madzimai evashandi aratidzire kwenguva yakareba gore rapfuura.
Vati pavakatanga kugadzirisa nyaya iyi nekumisa basa vakuru vekambani iyi ndipo pakatanga kuvhundutsirwa bhodhi nevamwe vashandi muhurumende.
VaTome vaudzawo komiti iyi kuti danho rakakotorwa nekambani iyi rekumutsiridza kambani yeHwange iri kunze kwemutemo sezvo rakaitwa pasina kutaurwa nevamwe varidzi vekambani iyi.
Vati pane pane humwe hurongwa hwakaitwa nedare repamusoro hwekuita izvi.
Vazivisawo kuti munyori wekambani iyi, VaAllen Masiya, vamiswa basa nemunhu akanzi nehurumende atungamire basa rekumutsiridza kambani iyi.
VaTome vati mamwe makambani ane zvikamu mukambani iyi ari kubvunza bhodhi kuti sei danho iri rakaitwa vasina kubvunzwa zvekuti zvave kutosvibisa chimiro chenyika.
Hurumende ine zvikamu makumi matatu nezvisere uye ndiyo ine zvikamu zvakawanda kudarika mamwe makambani nevanhuwo zvavo vanodarika zviuru zvina.
Mamwe makambani ari muHwange ari kunyika dzakaita seSouth Africa neBritain nedzimwe nyika.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa nemigodhi, VaTemba Mliswa vati VaChitando, VaTundiya pamwe nevese vane chekuita nenyaya yeHwange vachakokwawo kuzopa humbowo.